माडी पुग्ने पर्यटककाे राेजाइमा मगर हाेमस्टे
चितवन । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने माडीमा पुग्ने पर्यटकको रोजाइमा त्यहाँ रहेको घरबास (होमस्टे) हुने गरेको छ ।
माडी नगरपालिका वडा नं. ८ मा रहेको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टे (मगर होमस्टे) ११ घरपरिवारले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
परम्परागत खानासँगै संस्कृति र कलाको आनन्द त्यहाँको घरबासमा लिन सकिन्छ । सो क्षेत्रमा रहेका निजी होटलको भन्दा कम खर्चमा राम्रो सुविधा पाउने भएपछि माडी छिर्नेहरु त्यहाँको घरबासमा आकर्षित हुने गरेका छन् ।
होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनबहादुर पुनमगरका अनुसार एउटा घरमा दुई वटा कोठामा तीन जनाका दरले छ जना बस्न सक्ने क्षमता रहेको छ । सबै कोठामा सँगै शौचालय, तातोपानी जस्ता आवश्यक सुविधा रहेका छन् ।
पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको माडी क्षेत्र निकुञ्ज र चुरे पहाडको बीचमा पर्दछ । प्राकृतिक सुन्दरतासँगै धार्मिक र कृषि क्षेत्रको अवलोकन गर्न पनि यहाँ पर्यटक आउने गर्दछन् ।
वि.सं. २०७२ मा शुरु भएको घरबासको बीच भागमा ठूलो सामुदायिक भवन रहेको छ । जहाँ मगर जातिको पहिचान झल्कने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाइन्छ । ठूलो समूहमा पाहुनाको उपस्थिति हुँदा खाना पकाउने व्यवस्थासमेत सामुदायिक भवनमै हुने मगरले बताए ।
अध्यक्ष मगरले पाहुना धेरै आएपछि उत्साहित हुँदै भने, ‘हालसम्म हामीले १० हजार ४०० पाहुनाको स्वागत गरिसकेका छौँ ।’ घरबासमा आउनेलाई मगर समुदायले फूलमालाले स्वागत गर्ने गर्दछन् ।
उनका अनुसार देशैभरबाट घरबासमा पाहुना आउन थालेका छन् । माडी छिर्ने पर्यटक निजी होटल छोडेर घरबासमा बस्ने गरेको मगरको भनाइ थियो ।
साविक अयोध्यापुरी गाविसका अध्यक्ष पूर्णभद्र पनेरु यहाँ आउने पर्यटकको बसाइँको पहिलो छनोट अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबास बन्ने गरेको बताउँछन् ।
म्याग्दी, पर्वतबाट बसाइँ सरी यहाँ आएका पुनमगर समुदायको घरबासमा सोरठी, मारुनीसमेतको आनन्द लिन पाइन्छ । पर्या–पर्यटनसँगै धार्मिकरुपमा वैकुण्ठ ताल हेर्न आउने पनि यहीको घरबास पुग्छन् ।
शुरुमा अयोध्यापुरी मध्यवर्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एउटा घरबासलाई रु. तीन लाखका दरले बिनाधितो ऋण दिएर शुरु गरिएको हो ।
सो सहकारीका अध्यक्षसमेत रहेका पनेरुका अनुसार घरबास सञ्चालन गर्नेलाई तालीमसमेत दिइएको छ । पछि तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) ले स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । तालले एक परिवारलाई घरबास व्यवस्थित गर्न रु. दुई लाख ५० हजार हाराहारी खर्च गरेको पनेरुले जानकारी दिए । व्यवस्थित पलङ, कोठाको सजावट, शौचालय, तातोपानी लगायतमा तालले सहयोग गरेको हो ।
घरबासमा हालै मात्र नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूतले भ्रमण गरी आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको अध्यक्ष मगरले बताए ।
घरबास सञ्चालक तुलबहादुर पुन मगर बजारको भन्दा सस्तो र सुलभ मूल्यमा खान, बस्न पाउने भएपछि पर्यटक आउने गरेको बताउँछन् ।
बजारमा कोठाको रु एक हजारदेखि रु एक हजार ५०० सम्म पर्ने भए पनि घरबासमा रु. ६०० मा बस्न पाइने उनले बताए । खानामा पनि बजारको भन्दा सस्तो मूल्यमा खुवाउने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘बजारमा बस्नुभन्दा घरबासमा बस्नु सस्तो र खाना स्वस्थकर भएकाले पर्यटकको आगमन बढेको छ ।’
घरायसी काम गरेर घरबासबाट मात्रै रु. ३० देखि ३५ हजारसम्म मासिक कमाई हुँदै आएको मगरले बताए । घरबासमा रु. २५० मा खाना खुवाउने गरिएको छ ।
घरमै पालेका स्थानीय जातको हाँस, कुखुराको मासु खुवाईन्छ । घरबासका लागि दुई जनालाई स्थानीय जातको कुखुरा पाल्न र दुई जनालाई तरकारी खेती गर्नसमेत सहयोग गरिएको छ ।
काठमाडौँ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३.४५ प्रतिशतले घटेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार आज परिसूचक घटेर १२०९.६२ अंकमा झरेको छ । आज नेप्सेमा १७१ कम्पनीको १२ लाख ७५ हजार ६२३ कित्ता
सराेकार समितिकाे ठहर : उपकुलपतिको राजीनामा नै उपयुक्त उपाय
घोराही । ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाऊ अभियान’ नाममा केही दिनअघि गठित सरोकार समितिले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीको राजीनामा माग गरेको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट विमानस्थलबाट फर्काइनुको रहस्य यस्तो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न सिंगापुर जान लागेका गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टलाई मदिरा सेवन गरेको र अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै फर्काइएको छ।